06/27/12 ~ Myanmar Forward
Posted by drmyochit Wednesday, June 27, 2012, under ကာတွန်းများ | No comments
ဗီယက်နမ်၏တောင်တရုတ်ပင်လယ်အတွင်း သဘာဝဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်မှုရပ်ဆိုင်းရန် တရုတ်မှတောင်းဆိုခြင်း
Posted by drmyochit Wednesday, June 27, 2012, under | No comments
သဘာဝဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်မှုအစီအစဉ်ကိုရပ်တန့်ရန်နှင့် ပင်လယ်ပိုင်းအငြင်းပွားမှုလေ့လာ စာင့်ကြည့်ရေး နှစ်နိုင်ငံ သဘောတူညီချက် ကိုလေးစားရန် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံအား တရုတ်နိုင်ငံမှ ဇွန်လ ၂၆ ရက် နေ့တွင် ထပ်မံ တောင်းဆိုခဲ့ပါသည်။
တောင်ကိုရီးယားတွင် ကုန်တင်ကားမောင်းသူများ သပိတ်မှောက်
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရှိကုန်တင်ကားမောင်းသူများ၏ သပိတ်မှောက်မှုများ နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း ဖြစ်ပွားနေစဉ် အ တွင်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေမှု များနည်းနိုင်သမျှ နည်းစေရေးကူညီရန်အ တွက် ယာဉ် များနှင့် ယာဉ်မောင်းများကို ဆိပ်ကမ်းများသို့ ထောက်ပံ့သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း စစ်ဘက်မှ ဇွန် လ ၂၆ ရက်နေ့တွင်ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။
ဒမတ်စကတ်မြို့၏ ဆင်ခြေဖုံးဖြစ်သည့် Hameh ESifh Qudsaiah တွင် ဆီးရီးယားတပ်ဖွဲ့များနှင့် လက်နက် ကိုင်သူပုန်များအကြား တိုက်ပွဲများမှာ ဇွန်လ ၂၅ ရက်ညတစ်ညလုံးမှ ဇွန်လ ၂၆ ရက်အာရုဏ်တက် အချိန် အထိ ပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ ဒမတ်စကတ်မြို့နှင့်ဝန်းကျင်ဒေသများတွင် မငြိမ်သက်မှုများဖြစ်ပွား ခဲ့သော ၁၆ လတာကာလအတွင်း အဆိုးဆုံးတိုက်ပွဲ တစ်ခုဖြစ်ပြီး ပေါက်ကွဲမှု များနှင့်သေ နတ်သံများကြောင့် ဒေသခံအများစုမှာ အိပ်စက်မရနိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့ရပါသည်။ ဆီးရီးယားတပ် ဖွဲ့အနေဖြင့် Qudsaiah များတွင် သူပုန်များရှိနေမှုကို ရှင်းလင်းရန်ကြိုးပမ်းမှုအနေဖြင့် ၎င်းင်းဒေသတွင် လက်နက် ကိုင်ဆန့်ကျင်သူများနှင့် တိုက်ခိုက်နေကြောင်း အစိုးရလိုလားသောသတင်း ဌာနများမှ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဆီးရီးယားလွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် (FSA) သူပုန် အဖွဲ့ဝင် ၃၀၀ ကျော်သည်Hameh ESifh Qudsaiah ဒေသများတွင် ရှိနေဆဲဖြစ်ကြောင်း ဒမတ် စကတ်မြို့အနောက်ဘက်ရှိ Qasioun တောင်၏ အနောက်ဘက်ဆင်ခြေလျောများတွင် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး နီးကပ်စွာရှိနေကြကြောင်း မျက်မြင်တွေ့ ရှိသူတစ်ဦးမှ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
တောင်ကိုရီးယားသည် အီရန်မှ ရေနံတင်ပို့မှုဇူလိုင်လတွင် ရပ်ဆိုင်းမည်ဆိုခြင်း
ဥရောပသမဂ်္ဂသည် အီရန်၏ရေနံတင်ပို့မှုများအပေါ် ချမှတ်ထားသော အရေးယူပိတ်ဆို့မှုများအား စတင် အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့် တောင်ကိုရီးယားအနေဖြင့် ဇူလိုင်လမှစ၍ အီရန်နိုင် ငံမှရေနံတင်သွင်းမှုများအား ရပ်တန့်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း တောင်ကိုရီးယား ဘဏ္ဍာရေး ၀န်ကြီးဌာနက ဇွန်လ ၂၆ ရက်နေ့တွင် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
၂၇-၆-၂၀၁၂ ( နံနက်ပိုင်း )
Posted by Anonymous Wednesday, June 27, 2012, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | No comments
-ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဦးဌေးဦး ခေါင်းဆောင်သော ချစ်ကြည် ရေးအဖွဲ့ဂျပန်နိုင်ငံ ခရီးစဉ်အတွင်း ဂျပန်နိုင်ငံ ဖတ်ရန်
-နယ်စပ်လူထုအကျိုး မယ်တော်ဆေးခန်း ပြည်တွင်းနဲ့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်လို ဖတ်ရန်
-ရခိုင်ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ အစိုးရအဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး ဖတ်ရန်
-ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူထားမှုများကို KNU နှင့်ဦးအောင်မင်းအဖွဲ့ ပြန်ဆွေးနွေး ဖတ်ရန်
-ကူညီထောက်ပံ့မှုလျှော့ကျ၍ ဘော်ဒါနေရွှေ့ ပြောင်း မြန်မာကျောင်းသူကျောင်းသားများ အခက်ကြုံ ဖတ်ရန်
-လားရှိုး-မူဆယ်လမ်းမှ စစ်ယာဉ်တန်း တိုက်ခိုက်ခံရ ဖတ်ရန်
-မြန်မာဘက် ပို့မယ့် လက်နက်မျိုးစုံ ထိုင်းရဲ ဖမ်းမိ ဖတ်ရန်
Posted by Anonymous Wednesday, June 27, 2012, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | 1 comment
မြန်မာနိုင်ငံ ဖက်ခြမ်းကို တင်ပို့ရောင်းချမယ်လို့ ယူဆရတဲ့ ထိုင်းဘတ်ငွေ (၅) သန်း ခန့်တန်ဖိုးရှိတဲ့ လက်နက် မျိုးစုံ (၄၇) လက်ကို ရှမ်းပြည်နယ် အရှေ့ပိုင်း တာချီလိတ်မြို့ တဖက်ကမ်း ထိုင်းနိုင်ငံ မယ်ဆိုင်မြို့မှာ ထိုင်း လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ဇွန်လ (၂၅) ရက်နေ့ ညနေပိုင်းက ဖမ်းဆီး မိခဲ့တယ်လို့ ထိုင်းနယ်စပ် အာဏာပိုင် တွေဆီက သတင်းရရှိပါတယ်။ အဲဒီ လက်နက်တွေဟာ ရွှေတြိဂံနယ်မြေက လာတာဖြစ်ပြီး ထိုင်းလက်နက် ရောင်းဝယ် သူတွေဆီက တဆင့် မြန်မာနိုင်ငံ တာချီလိတ် ဘက်ကို ရောင်းချ မယ်လို့ ယူဆရကြောင်း ထိုင်းရဲက ပြောပါတယ်။
RPG လောင်ချာ ၁၂ လက်နဲ့ ဗုံးသီး ၉ လုံး၊ AK 47 မောင်းပြန်ရိုင်ဖယ် ၁၇ လက်၊ M 79 လောင်ချာ ၁၂ လက်နဲ့ M 16 မောင်းပြန် ရိုင်ဖယ် ၆ လက် ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
အမေရိကန်မိုင်းရှင်းရေယာဉ် ၄ စီး ပင်လယ်ကွေ့ဒေသသို့ရောက်ရှိနေခြင်း
Posted by Anonymous Wednesday, June 27, 2012, under နိုင်ငံတကာသတင်းများ | No comments
အမေရိကန်ရေတပ်မှ မိုင်းရှင်းရေယာဉ် ၄ စီးဖြစ်သည့် USS Sentry? Devastator? PioneerESifh Warrior တို့သည် ပင်လယ်ရေကြောင်းသွားလာမှုဘေးကင်းလုံခြုံစေရေးနှင့် အမေရိကန် အမှတ်(၅)ရေ ယာဉ်စုအား အထောက်အကူပေးရေးတို့အတွက် ပင်လယ်ကွေ့ဒေသသို့ ဇွန်လ ၂၃ရက်နေ့က ရောက်ရှိ ခဲ့ကြောင်း အမေရိကန် ရေတပ်ကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်ဟု Reuters သတင်းတစ်ရပ်အရ သိရှိရပါသည်။
ရုရှားသမ္မတပူတင်သည် အစ္စရေးနိုင်ငံသို့တစ်ရက်ကြာ အလည်အပတ်ခရီးရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်း
ရုရှားသမ္မတ ဗလာဒီမာပူတင်သည် ဇွန်လ ၂၅ ရက်နေ့တွင် အစ္စရေးနိုင်ငံသို့ တစ်ရက်ကြာအလည်အပတ် ခရီးရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး အဆိုပါခရီးစဉ်အတွင်း နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကိစ္စရပ်များ အီရန်၊ ဆီးရီးယားနှင့် အီဂျစ် အရေးကိစ္စ ရပ်များကို အလေးထားဆွေးနွေးရန်မျှော်မှန်းထား ကြောင်း Xinhua သတင်း တစ်ရပ်အရ သိရှိရပါသည်။
အီရန်နိုင်ငံက နိုင်ငံတကာရေပိုင်နက်များတွင်ကင်းလှည့်မှုများ လုပ်ဆောင်သွားမည်ဟုဆို
အီရန်နိုင်ငံက ၎င်း၏ရေနံတင်သင်္ဘောများအား အကာအကွယ်ပေးရေးအတွက် နိုင်ငံတကာရေပိုင်နက် များတွင် ကင်းလှည့်မှုများလုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဇွန်လ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ဖော်ပြောကြား ခဲ့သည်ဟ Reuters သတင်းတစ်ရပ်အရသိရှိရပါသည်။
အီဂျစ်စစ်ဘက်သည် သမ္မတအသစ်နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဟုဆို
အီဂျစ်စစ်ဘက်အဆင့်မြင့်ကောင်စီအကြီးအကဲ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဟူစိန်တန်တာဝီက နိုင်ငံတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု ရရှိစေရန် သမ္မတအသစ်မိုဟာမက်မော်စီနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဇွန်လ ၂၅ ရက်နေ့က ပထမဆုံးအကြိမ်ပြုလုပ်သည့် သမ္မတအသစ်နှင့်ဆွေးနွေးပွဲတွင် ကတိပြုပြောကြားခဲ့သည်ဟု Xinhua သတင်းတစ်ရပ်အရသိရှိရ ပါသည်။
၎င်းအချိန်တွင် ယာယီဝန်ကြီးချုပ် ကမေးလ်အယ်လ် ဂန်ဇူရီသည် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေစည်းမျဉ်းအရ နုတ်ထွက်ခွင့် တင်ခဲ့ပါသည်။ သို့သော် ၎င်း၏နုတ်ထွက်ခွင့်နှင့်ပတ်သက်၍ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတန်တာဝီက သမ္မတသစ်ကျမ်းကျိန်ပြီးသည့်တိုင်အောင် နှင့်အစိုးရအသစ်ဖွဲ့စည်းပြီးသည့်တိုင်အောင် ဆက်လက်တာဝန် ထမ်းဆောင်ရန်တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ထို့အပြင် ဂန်ဇူရီ သည် မူဘာရက်နုတ်ထွက်သွားပြီးကတည်းက ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် နိုင်ငံ၏လုံခြုံရေးနှင့်စီးပွားရေးဆိုင်ရာ နောက်ဆုံးအခြေအနေများအားတင်ပြရန် သမ္မတအသစ်မော်စီနှင့် ဇွန်လ ၂၅ ရက်နေ့က တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ ပါသည်။ မော်စီသည် ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုမှုကို ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံးရှေ့မှောက်တွင် ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ပြီး စစ်ဘက်အဆင့်မြင့်ကောင်စီသည် ဇွန်လ ၃၀ ရက်နေ့တွင် မော်စီအား အာဏာလွှဲပြောင်းပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
သို့သော်စစ်ဘက်အဆင့်မြင့်ကောင်စီ၏ ဇွန်လ ၁၇ ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သော ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာနောက်ဆက်တွဲကြေညာချက်အရ စစ်ဘက်အဆင့်မြင့်ကောင်စီသည် အောက်လွှတ်တော်အား ဖျက်သိမ်းပြီးနောက်တွင် ဥပဒေပြုရေးအာဏာအား ပြန်လည်ရယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။
တောင်ကိုရီးယားရေတပ်က ပင်လယ်ဝါတွင် ခေတ်မီရေတပ်အခြေစိုက်စခန်းသစ်တစ်ခု တည်ဆောက်သွားမည်ဟုဆို
တောင်ကိုရီးယားရေတပ်သည် ပင်လယ်ဝါရှိတင်းမာမှုဖြစ်ပွားနေသော Baengnyeong ကျွန်း တွင် ရေကြောင်းကာကွယ်နိုင်စွမ်းကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့် ဒေသခံများကိုအကာအကွယ်ပေးရန်တို့အတွက် ခေတ်မီရေတပ် အခြေစိုက်စခန်းသစ်တစ်ခုတည်ဆောက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း တာဝန်ရှိသူများက ဇွန်လ ၂၅ ရက်နေ့ တွင် ပြောကြားခဲ့သည်ဟု Newsnow သတင်းတစ်ရပ်အရသိရှိရပါသည်။
တူရကီနိုင်ငံသည် ဆီးရီးယားအရေးကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ NATO အဖွဲ့၏ အကူအညီရယူရန် ရည်မှန်းထားသည်ဟုဆို
တူရကီနိုင်ငံသည် ဆီးရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်များက ၎င်း၏ F-4 ဂျက်တိုက်လေယာဉ်တစ်စင်းအား လွန်ခဲ့သည့် ရက်သတ္တပတ်အတွင်းကပစ်ချခံခဲ့ရပြီးနောက် ဇွန်လ ၂၆ ရက်နေ့အထူးအစည်းအဝေးတစ်ရပ်တွင် NATO မဟာမိတ်အဖွဲ့ထံမှ ကျောထောက်နောက်ခံပြုပေးရေး တောင်းဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် အဆိုပါမတော် တ ဆဖြစ်ရပ်အား ဆီးရီးယားနိုင်ငံက မိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်မှုတစ်ရပ်အဖြစ် ပြောကြားခဲ့သော်လည်း တူရကီနိုင် ငံက အဆိုပါကိစ္စရပ်အားရန်စမှုလုပ်ရပ်အဖြစ် ရှုမြင်ထားကြောင်း ဇွန်လ ၂၅ ရက်နေ့ Newsnow သတင်း တစ်ရပ်အရ သိရှိရပါသည်။
အင်ဒိုနီးရှားနှင့် အမေရိကန်လေတပ်ဖွဲ့တို့က ပူးတွဲစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ခြင်း
အင်ဒိုနီးရှားနှင့် အမေရိကန်လေတပ်တို့သည် သဘာဝဘေးဒဏ်သင့်ဒေသများသို့ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး နှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်မှုစွမ်းရည် မြှင့်တင်ရန်ရည်ရွယ်သည့် နှစ်နိုင်ငံလေတပ်ဖွဲ့ ပူးတွဲစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ရပ်အား ဇွန်လ ၂၅ ရက်နေ့တွင် စတင်ပြုလုပ်ခဲ့ကြကြောင်း Xinhua သတင်း တစ်ရပ်အရသိရှိရပါသည်။
တောင်တရုတ်ပင်လယ်ရှိ လက်ရှိအခြေအနေကို ပိုမိုဆိုးရွားအောင်မပြုလုပ်ရန် တရုတ်နိုင်ငံက ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကို တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ခြင်း
တောင်တရုတ်ပင်လယ်ရှိ လက်ရှိအခြေအနေကို ပိုမိုဆိုးရွားအောင်မပြုလုပ်ရန် တရုတ်နိုင်ငံက ဇွန်လ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကို တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့သည်ဟု Xinhua သတင်းတစ်ရပ်အရ သိရှိရပါသည်။ တောင်တရုတ်ပင်လယ်ရှိ Zhongye ကျွန်းပေါ်တွင် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံက သူငယ်တန်းကျောင်းတစ်ခု တည်ဆောက် နေသည်ဆိုသော ထင်မြင်ချက်ထွက်ပေါ်နေစဉ် တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောရေး ဆိုခွင့်ရှိသူ ဟောင်လီက ပုံမှန်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုတွင် ထိုကဲ့သို့မှတ်ချက်ပြုပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ် ပါသည်။
ကူညီထောက်ပံ့မှုလျှော့ကျ၍ ဘော်ဒါနေရွှေ့ ပြောင်း မြန်မာကျောင်းသူကျောင်းသားများ အခက်ကြုံ
ထိုင်းနိုင်ငံ၊တာ့ခ်ခရိုင်မဲဆောက်မြို့ရှိရွေ့ပြောင်းမြန်မာကျောင်း များတွင် ဘော်ဒါနေကျောင်းသူ ကျောင်းသားများ အတွက်အလှူရှင်များ၏ ကူညီထောက်ပံ့မှုများ လျှော့ချလိုက်သဖြင့် အခက်အခဲများနှင့်ကြုံတွေ့နေရကြောင်းသိရသည်။
မဲဆောက်မြို့ရှိ Children Development Centre (CDC)ကျောင်း၏ဒုကျောင်းအုပ်ဆရာနေမျိုးအေးက “အလှူရှင်တွေကအကူညီတွေ ၂၀ရာခိုင်နှုန်းလောက်လျှော့ချလိုက်တော့ ကလေးတွေအတော်ဒုက္ခရောက်တယ်။ အစားအသောက်အပိုင်းတွေ၊ အခြားဘော်ဒါအတွက် ကုန်ကျမှုတွေရာ ရနိုင်တာလေးတွေနဲ့မျှသုံးနေတာပေါ့။” ဟုပြောသည်။
ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူထားမှုများကို KNU နှင့်ဦးအောင်မင်းအဖွဲ့ ပြန်ဆွေးနွေး
နှစ်ဖက် ငြိမ်းချမ်းရေးသဘော တူညီချက်များကို ပြန်လည်ဆွေးနွေးသည့် အနေဖြင့် ကရင်အမျိုးသားအစည်း အရုံး-KNU နှင့် မြန်မာအစိုးရ ငြိမ်းချမ်းရေးကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်မင်းအဖွဲ့တို့သည်ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဆောက်မြို့ Wattana Village Resort ဟိုတယ်၌ ယနေ့ညနေ ၃နာရီခန့်မှ ၅နာရီအထိ တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
ယနေ့တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပွဲတွင် KNU ဘက်မှ အဖွဲ့ဝင် ၆ဦးပါဝင်သည့် အတွင်းရေးမှူးချုပ် နော်စီဖိုးရာစိန် ဦးဆောင်သော အဖွဲ့နှင့် အစိုးရဘက်မှ ဦးအောင်မင်း ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ် ၉ဦး အဖွဲ့တို့က တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ရခိုင်ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ အစိုးရအဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
နိုင်ငံတော် သမ္မတ၏ ခွင့်ပြုချက်နှင့်အတူရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ တရားဝင်ဖိတ်ကြားမှုကြောင့် ရန်ကုန်ရှိရခိုင်အမျိုးသားများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသောရခိုင်ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့သည်ယနေ့မွန်းလွဲ ၂နာရီတွင်စစ်တွေမြို့ ပရကရုံး၌ ပြည်နယ်အစိုးရ ၀န်ကြီးချုပ် ဦးလှမောင်တင့်ပါဝင်သော အစိုးရအဖွဲ့နှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
ထိုဆွေးနွေးပွဲသို့ စစ်တွေမြို့ခံလူထု ၂၀၀နီးပါး တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့မှ တောင်းဆိုသည့် စစ်တွေဈေးကြီးအမြန်ဆုံးဖွင့်လှစ်နိုင်ရန်အပြင် ပြည်သူများ၏
လုံခြုံရေးကာကွယ်ပေးရန်၊ ပြည်သူ့စစ်ဖွဲ့ပေးရန်နှင့်ရခိုင်နှင့် ဘဂါင်္လီများအားနေရာခွဲခြားထားရှိရန် စသည့်အချက် ၄ချက်ကို သဘောတူညီမှု ရရှိခဲ့သည်ဟုအဖွဲ့မှပြောခွင့်ရှိသူအရှင်ကုမာရ က ကေအိုင်စီကိုပြောသည်။
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဦးဌေးဦး ခေါင်းဆောင်သော ချစ် ကြည်ရေးအဖွဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံ ခရီးစဉ်အတွင်း ဂျပန်နိုင် ငံ
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးဌေးဦး ဦးဆောင်သော ချစ်ကြည်ရေးအဖွဲ့သည် တိုကျိုမြို့၌ ရှိနေစဉ် အတွင်း ဇွန်လ(၁၄)ရက် (၁၇၀၀) နာရီတွင် ဂျပန်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာနသို့ သွားရောက်ပြီး နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး၏ အစည်းအဝေး ခန်းမတွင် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး (H.E.Mr. Koichiro Gemba) နှင့် တွေ့ ဆုံသည်။
အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဦးဌေးဦးနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး (H.E.Mr. Koichiro Gemba) တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးစဉ်
နှစ်ပေါင်း ၂၀ကျော် ကာလအတွင်း ပြည်ပခရီးစဉ်တွေ သွားလာနိုင်ပြီးတော့ လွှတ်တော် နိုင်ငံရေး မှာလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပါဝင်လာနိုင်တဲ့အထိ အပြောင်းအလဲတွေ ရှိလာနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တိုင်းရင်းသားတွေ အတိုက်အခံနိုင်ငံရေးအဖွဲ့တွေနဲ့လည်း အစိုးရက ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့ ကြိုးပမ်းနေတာပါ။ ဒီကနေ့မှာဆိုရင်တော့ ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်း ကော်မတီ ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ မီးရထား
တောင်ကိုရီးယားတွင် ကုန်တင်ကားမောင်းသူများ သပိတ်မှေ...
တောင်ကိုရီးယားသည် အီရန်မှ ရေနံတင်ပို့မှုဇူလိုင်လတွင...
အမေရိကန်မိုင်းရှင်းရေယာဉ် ၄ စီး ပင်လယ်ကွေ့ဒေသသို့ေ...
ရုရှားသမ္မတပူတင်သည် အစ္စရေးနိုင်ငံသို့တစ်ရက်ကြာ အလည်...
အီဂျစ်စစ်ဘက်သည် သမ္မတအသစ်နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွ...
တောင်ကိုရီးယားရေတပ်က ပင်လယ်ဝါတွင် ခေတ်မီရေတပ်အခြေစ...
တူရကီနိုင်ငံသည် ဆီးရီးယားအရေးကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ NATO...
အင်ဒိုနီးရှားနှင့် အမေရိကန်လေတပ်ဖွဲ့တို့က ပူးတွဲစစ...
တောင်တရုတ်ပင်လယ်ရှိ လက်ရှိအခြေအနေကို ပိုမိုဆိုးရွာ...
ကူညီထောက်ပံ့မှုလျှော့ကျ၍ ဘော်ဒါနေရွှေ့ ပြောင်း မြန်မ...